Qiimaha baradhada ayaa si aad ah kor ugu kacay Vladivostok - PotatoSystem
Vladivostok, baradhada si aad ah ayey kor ugu kacday
Bishii Juun, gudaha Vladivostok, baradhada ayaa sicirkooda kor u kacay. Suuqyada, qiimaha kiilogaraamku wuxuu gaarayaa 200 rubles. Tani, marka loo eego kuwa wax iibiya, waxay la xiriirtaa hoos udhaca sahayda laga keenay Shiinaha.
Dhibaatooyinka ka dhasha marinka gawaarida culus ee xuduuda Shiinaha la leeyahay ee Primorye, helida baradhada ayaa yaraatay. Dukaamada yaryar iyo silsiladaha waaweyn waxaa lagu qasbay inay raadiyaan badal khudradda Shiinaha. Baradhadu waxaa laga keenay qaybta dhexe ee Ruushka, Azerbaijan iyo Masar. Qiimaha dhoofinta iyo qiimaha sare ee iibsadayaasha ayaa ugu dambeyntii ka muuqanaya qiimaha ugu dambeeya ee iibsadaha. Baradhada ugu qaalisan waa dhalinyaro, badweyn. Sida ku xusan hal nooc, sababta oo ah xuduudaha xiran, shaqaalaha Shiinaha ayaa awoodi waayey inay ku laabtaan beeraha ku yaal Primorye, sidaa darteed yaraanta baradhada maxalliga ah ayaa sidoo kale suurtagal ah xilliga dayrta.
Hada barandhada "Remy" waxaa lagu iibiyaa 52,99 rubles halkii kiilogaraam. Run, isagu kuma joogin Lugovoi, laakiin wuxuu ku dhammaaday Balyaev.
Sababtoo ah xaqiijinta keenida Shiinaha ayaa xiran, waxaan baradhada ka rarnaa Azerbaijan iyo Krasnodar. Maaddaama qiimaha alaab-qeybiyeyaashu ay sarreeyaan, qiimaha tafaariiqda ayaa sidoo kale kordhaya. Laakiin kuwanu waa dhibaatooyin ku-meel-gaadh ah. Ka dib marka la furo xuduudaha, qiimaha ayaa yaraanaya. Waxaan sidoo kale aaminsanahay soosaarayaasha maxalliga ah. Ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo ku saabsan kaydka baradhada shabakaddeenna. Dukaammadaas oo aan lahayn baradho, sida muuqata waqti uma helin inay ku soo bixiyaan barta, ”ayay ku yidhaahdeen Remy.
Sambury, baradhada ka timid Gobolka Moscow iyo Primorye waxaa lagu iibiyaa 79,99 iyo 79,9 rubles, siday u kala horreeyaan. Baradho yaryar oo ka timid Azerbaijan waa qaalisan yihiin - 99,9 rubles halkii kiilo.
Qiimaha tafaariiqda baradho ayaa kor u kacay. Sababta ayaa ah in alaab-qeybiyeyaashu is beddeleen. Hadda ma jiro baradho Shiine ah, maadaama Xiriirka Ruushku adkeeyey shuruudaha dhoofinta baradhada, habka loo helo ogolaanshaha soo dejinta ayaa noqday mid dhib badan. Shabakaddeenna ayaa iibisa baradhada Masar, Azerbaijan iyo qaybta dhexe ee Ruushka, Primorye iyo qayb yar oo ka socota Shiinaha (laakiin aad bay u yaryihiin). Qiimaha aan ku iibsanno barandhada wuxuu ka bilowdaa 75 rubles halkii kiilo, ”Sambury ayaa yiri.
Shabakada "Fresh 25" baradhada ugu jaban - oo ah 34,9 rubles halkii kiilogaraam. Laakiin dukaannada oo dhami ma hayaan. Baradhada yaryar waxaa laga keenay Azerbaijan.
Qiimo u helida shabakadeena isma bedelin. Annagu, ahaan ahaan dukaanno, waxaan ku tiirsannahay qiimaha wax-ku-biiriyaha laga soo qaado alaabada. Dabcan, xaaladda waxaa saameyn ku yeeshay joojinta sahaydii laga keenay Shiinaha. Waxaan ka keenay barandho Azerbaijan waxaanan ku iibinay qiimaha saami dhan 99,9 rubles halkii kiilog kiiloogaraam. Sannadkii hore, waxaan bixinaa 34,9 rubles midkiiba, ”ayay ku yiraahdeen Fresh 25.
Suuqyada Vladivostok, baradhada yaryar ayaa xitaa ka qaalisan - laga bilaabo 100 illaa 200 rubles halkii kiilo, laakiin ugu yaraan waa maxalli, badiyaa degmada Spassky.
Baradho sanadkii la soo dhaafay ayaa dhamaanaya. Alaab-qeybiyeyaasha qaar ma heystaan ​​gabi ahaanba. Laakiin saldhigyada kuma jiraan baradho da 'yar oo Shiine ah oo dhallinyaro ah, isla markaana sicir-bararkii maxalliga ahaa, ee ay beeralaydu ku beero filimka iyo guryaha lagu koriyo bishii Febraayo. Intaa waxaa dheer, hadda waa ay bilaabaneysaa inay soo muuqato, qiimaheeda saldhigyadu waa 130-150 rubles halkii kiilogaraam Waxaan ka iibinayaa baradhokan 200 ruble halkii kiilo, ”ayuu yiri iibiyaha suuqa Balyaeva.
Suuqa ku yaal Sportivnaya, laba ama saddex iibiya waxay ka heli karaan baradhadii sanadkii hore 70-80 rubles halkii kiilog kiiloogaraam. Ku dhawaad ​​qof kasta waa isku da 'yar yahay: laga bilaabo 130 rubles (yar) ilaa 150 rubles (waa weyn). Halkan iyo halkaas oo ay ku bixiyaan 180 rubles halkii kiilo.
“Baradhadu waa deegaan, dhadhan fiican, qaado!” Lama barbar dhigi karo Shiinaha, ”iibiyaha wuxuu ka dhaadhiciyaa suuqa Sportivnaya. - Muxuu qiimaha u sarreeyaa? Ma ogtahay inta shaqo ee lagu maal galiyay dalaggan? Bacriminta, kharashaadka gaadiidka - waxaan sidoo kale u baahan nahay inaan bixinno wax kasta. Bishii Agoosto, marka dalagga ugu weyn uu bislaado, qiimaha, dabcan, wuu sii yaraan doonaa. ”
Source: Midho Online
Tags: Владивостокbaradhada badabaradhada laga dhoofiyo Shiinaha